मेरी आमा र कोइली आमा | Hamro Patro
मेरी आमा र कोइली आमा
नरेन्द्रराज प्रसाई - Apr 07 2018
मेरी आमा र कोइलीदेवी खुब मिल्थे । एक दिन कोइलीदेवी मेरी आमा भागीरथा प्रसाईसँग भन्दै थिइन्- "छोरा हजुरले पाइदिनु भयो तर हजुरका छोरा बुहारी मेरा पनि छोरा बुहारी भए ।" दुबै आमाहरूले एकअर्कालाई भेट्ता पनि दङ्ग पर्थे र आआफ्ना दुक्ख, सुक्ख पनि फुकाउन थालिहाल्थे ।
हो, साँच्चै हो; कोइलीदेवीलाई पनि म आमा नै भन्थें । उनी बाँचुञ्जेल म र मेरी पुरोधिका इन्दिराबाट पनि उनको सेवामा कञ्जुस्याईं गरेनौ । कोइलीदेवीको दिनचर्या पनि नइ गृहमा नै प्राय: वित्थ्य‍ो ।
कोइली आमा रहँदा या नरहँदा एभिन्युज टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष मेरा साथी भाष्करराज राजकर्णिकारले जुन योगदान दिए त्यो अविष्मरणीय नै रह्य‍ो ।
कोइली आमाको भौतिक चोला सकिएका दिन मुक्तक सम्राज्ञी उषा शेरचनबाट नै सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग जुटेको बेहोरा पनि म‌ैले कहिले भुल्न सकिन ।
नइ प्रकाशनले कोइलीदेवीको जीवन कालमा नै "कोइलीदेवी पुरस्कार"को स्थापना गरेको थिय‍ो । वास्तवमा उनी रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका, सङ्गीतकार र रचनाकार पनि थिइन् ।
कोइलीदेवी पुरस्कार स्थापना गर्न रेडियो सगरमाथा, उषा शेरचन, उन्नती बोहरा 'शीला' र प्रा.डा.रामप्रसाद उप्रेतीको उच्चस्तरीय भूमिका थियो ।
कोइली आमाबारे मैले "कोइलीदेवीको जिन्दगानी" (२०६१) नामक जीवनी कृति लेखें र त्यस ग्रन्थको भूमिका कोइली आमाले नै लेखिदिइन् । अनि त्यस भूमिकामा पनि उनका आँसु नै बगेका छन् ।
कोइलीदेवीको सङ्क्षिप्त जीवनी
कोइलीदेवीलाई शिशुकालदेखि नै उनकी बज्यैले पालेकी थिइन् । वास्तवमा उनकी आमाको शेषपछि पनि बाबुले अर्की ल्याएकाले उनको बेस्याहार हुन नदिन रामबहादुरकी आमा लागिपरेकी थिइन् । पाँच वर्षसम्म मरीतरी हुर्काएर रामबहादुरले आफ्नी छोरी पान्तरीलाई काठमाडौंमा भएकी आफ्नी बहिनी डिट्ठिनी मानप्रिया भट्टका काखमा छाडिदिए । त्यसपछि पान्तरीको भाग्यरेखामा क्रमशः साँध लाग्न थाल्यो । ठूली भइन्जेल पान्तरीले पनि आफ्नी फुपूलाई ‘मा’ भनिरहिन् ।
मानप्रियाले नै कोइलीदेवीको शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध गरिदिइन् । यिनले मखनटोलको पाठशालामा शिशुदेखि पाँच कक्षासम्म पढिन् । त्यसै बेला आफ्नी फुपूको सितारवादनमा कोइलीदेवीको पनि रस भिज्न थाल्यो । उनकी फुपूचाहिँ जुद्धशमशेरकी पत्नीहरुलाई सितार सिकाउने गुरुआमा थिइन् ।
मानप्रिया डिट्ठिनीको करबलले १९९८ सालमा कोइलीदेवीको पनि राणादरबार प्रवेश भयो । तर जुद्धशमशेरलाई सानी, पातली र काली कोइलीदेवीपट्टि आँखा लागेन र केही दिनपछि उनी जुद्धशमशेरको हुकुम प्रमाङ्गीले त्यहाँबाट हटिन् । त्यसपछि जुद्धशमशेरका हजुरिया जर्नेल सिंहशमशेरका दरबारमा कोइलीदेवीको प्रवेश भयो ।
सिंहशमशेरले कोइलीदेवीलाई मन पराए । त्यसैले त्यहाँ खानापिनादेखि लाउने सुत्नेसम्ममा कोइलीदेवीको हैसियतले फट्का मार्न थाल्यो । राणापरिवारकै खान्गीले कोइलीदेवीको शारीरिक बनोट पनि क्रमशः आकर्षक हुन थाल्यो । साथै उनको बोलीचालीदेखि अनुहारको रूपरङ्गसमेतमा परिवर्तन आउन थाल्यो । सिंहशमशेरले पान्तरीलाई अरू गायिका र नर्तकीमाझ राखेर भने— “मैले तिम्रो नाउँ आजदेखि कोइलीदेवी राखेँ ।” त्यतिमात्र होइन; सिंहशमशेरले उनलाई सुन्दर र महँगा पोसाकमा सजाउन थाले । सिंहशमशेरकै प्रेरणामा उनले फुटबल, टेनिस र रिङ खेल्न पनि थालिन् । हलुङ्गेको थालबाट उनी एक्कैचोटि चाँदीको थालमा भात खाने हैसियतमा अनुवाद भइन् । जनरल सिंहशमशेरको माया, सद्भावना र प्रेरणाले कोइलीदेवीको हृदयभित्रको सिर्जनाले पनि राम्ररी नै फक्रने मौका पाएको थियो । वास्तवमा सिंहशमशेरको कोइलीदेवीप्रतिको न्यानो मायाका कारण सिंहमहलमा कोइलीदेवीको हैसियत नै माथिल्लो कोटिको थियो । तर कोइलीदेवीको त्यो तुजुक, त्यो फूर्ति र त्यो हैसियत त्यस दरबारभित्र झन्नैझन्नै एक दशकजति मात्र कैदी भयो ।
फुपू मानप्रियाको राणादरबारबाट भोग सकिएपछि कोइलीदेवीको पनि सिंहमहलबाट बास उठेको थियो । त्यसपछि उनी पनि फुपूकै शरणमा लागिन् ।
कोइलीदेवीले सिंहमहलबाटै रेडियो नेपाल टेकेकी थिइन् । उनले २००७ चैत २६ गतेदेखि ४४ वर्षसम्म निरन्तर रेडियो नेपालमा बसेर आफ्नो गायनयात्राको इतिहास निर्माण गरिन् । उनका सङ्गीत र रचनामा गरी रेडियो नेपालमा २६० वटा गीत सुरक्षित छन् ।
कोइलीदेवीले औपचारिक रूपमा २००७ साल चैत २६ गते आफ्नो गीतिकवितालाई आफ्नै सङ्गीतको ताल र स्वरसँगै जनकानमा पुर्याएकी थिइन् । रेडियो नेपालकी प्रथम महिला गायक र सङ्गीतकार उनी नै थिइन् ।
कोइलीदेवीले प्रेमका गीत लेखिन् । उनका प्रकृति र प्रेम अनि जीवन र जगत्का शब्दरचनाले उनी चर्चित, प्रसिद्ध र अमर बनिन् । उनका राष्ट्रिय गीत र भजनले उनको अर्को लेखकीय परिचय गाँसियो । वास्तवमा उनी नेपाली भाषाकी भजनदेवीका नाउँले विख्यात भइन् । उनी आफै लेख्तै, सङ्गीत गर्दै भजन गाउने पहिलो नेपाली नारीस्रष्टा पनि थिइन् ।
कोइलीदेवीले तीनवटा कृतिको सिर्जना गरिन् । उनको पहिलो गीतिकविता सङ्ग्रह ‘सेवा पुस्तिका’ हो । उनले यस कृतिको शीर्षकलाई पुस्तिकासँगै जोडेर आफ्नो डम्फू पेटभित्रै लुकाइन् । २०१९ सालमा प्रकाशित ‘सेवा पुस्तिका’ प्रकाशनका लागि राजा महेन्द्रबाट कोइलीदेवीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
कोइलीदेवीको दोस्रो गीतिकविता सङ्ग्रह ‘समर्पण’ २०२५ सालमा प्रकाशित भएको थियो । वास्तवमा कोइलीदेवीका शब्दशब्द नै आलङ्कारिक भएका कारण उनका गीतिरचनाहरूले नेपाली मनलाई छोइरहे:
चाँप फुल्यो बनैभरि बासनाले छायो कसले मेरो मनमा पसी नयाँ माया लायो ?
कोइलीदेवीले २०६० सालमा ‘कोइलीभजन’ पनि जनसमक्ष ल्याइन् । भजनरानीका उपनाउँमा उनिएकी कोइलीदेवीले भजनको समष्टिगत कृति जनसमक्ष ल्याएपछि आफ्नो सिर्जना साङ्गोपाङ्ग भएको ठानिन् ।
कोइलीदेवीले आफ्नो एक्लो जीवनका हरेक घुम्तीमा गीत लेखिन्, कविता लेखिन्, निबन्ध लेखिन् र प्रबन्ध लेखिन् । उनी सिंहमहल बसेताकै गीतिकविता लेखनमा अग्रसर थिइन् । गीत गाउँदागाउँदै उनी रचनाकार भएकी थिइन् । अनि आफ्ना रचना खेलाउँदाखेलाउँदै उनी सङ्गीतकार पनि भएकी थिइन् । त्यसैले उनका गीतले नेपाली माटोमा लोकप्रियता स्थापित गरे । जसले गर्दा उनी स्रष्टाका रूपमा सुपरिचित भइरहिन्— माया मेरी मेरी भन्दै उसै बोलाएर हेर्छौ किन तिमी मलाई आँखा लोलाएर ।
कोइलीदेवी रेडियो नेपालमा भएताकै उनको साकारभक्त माथेमासँग प्रेम भएको थियो । उनको प्रेम झाङ्गिएका कारण उनीहरूको माया, प्रेम र विश्वास बिहेमा परिणत भयो । त्यसैले पैंतीस वर्षीय कोइलीदेवीको एकाउन्न वर्षीय साकारभक्त माथेमासँग बिहे सम्पन्न भयो । यी दम्पतीबाट सन्तानचाहिँ भएनन् । तर पनि यिनीहरूको जीवन हराभरा थियो । त्यति मात्र होइन बिहेपछि पनि बाँचुन्जेल यिनीहरू एकै दिन पनि छुट्टिएनन् । अन्ततः २०५६ साल जेठ ८ गते साकारभक्त माथेमाले कोइलीदेवीलाई छाडे ।
कोइलीदेवीले नेपालका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरिन् । साथै उनी चीन पनि पुगिन् । त्यति बेला उनले चीनका राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कवितासङ्ग्रह ‘सेवा’ दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले प्रत्युत्तरमा कोइलीदेवीलाई “नेपाली महिला भई तपाईंले किताब लेखेर संसारभरिका महिलाका लागि गौरवको काम गर्नुभयो” भनेका थिए ।
कोइलीदेवीको जीवनको तीव्र इच्छा तीर्थाटन पनि एक थियो । त्यसैले उनले नेपाल तथा भारतका प्रमुख तीर्थहरूको दर्शन गरेकी छिन् । त्यसै क्रममा यिनले वृषोत्सर्ग पनि गरिन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा उनले भनेकी थिइन् “अब म मरेपछि कसैले मेरो कुनै अन्त्यकर्म गर्नुपर्दैन; मलाई जलाइदिए मात्र पुग्छ ।”
कोइलीदेवीले जिन्दगीमा साहित्य र सङ्गीतलाई काँधमा बोकेर हिँड्दै जाँदा ‘गोरखादक्षिणबाहु’ पाइन् । उनले ‘इन्द्रराज्यलक्ष्मी प्रज्ञापुरस्कार’ पुरस्कार पनि पाइन् । साथै छिन्नलता गीतपुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र महाशक्ति सम्मानले पनि उनी सम्मानित भइन् ।
कोइलीदेवीका सम्मानमा नइ प्रकाशनद्वारा २०५६ देखि निरन्तर नइ कोइलीदेवी पुरस्कार प्रदान हुँदै आएको छ ।
कोइलीदेवीलाई नइको मनभित्र पुर्याउने पहिलो व्यक्ति चाहिं केशव खनाल थिए । नइकै पहलमा २०५७ साल चैत १० गते कोइलीदेवीलाई मरणासन्न अवस्थामा महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो, अनि उनको छातीमा प्रा.डा. अरुण सायमिले पेसमेकर राखिदिए । उनी बाँचुन्जेल उनको स्वास्थ्यसुरक्षाका लागि नइले नै यथोचित सेवा जुटाइरह्यो ।
कोइलीदेवीको भौतिक चोला २०६४ पुस ६ गते काठमाडौं घट्टेकुलोको डेरामा अस्तायो । त्यहाँदेखि सजाइएको मोटरमा उनको चोला आर्यघाट पुर्याइएको थियो । त्यसदिन उनको डेरादेखि आर्यघाटसम्म लागेको सबै खर्च समाजसेवी तथा मुक्तक सम्राज्ञी उषा शेरचनले बेहोरेकी थिइन् ।